Hormuud News Friday, April 27th, 2018 | 08:38
[Saturday, April 7th, 18] :: Raysal wasaaraha cusub ee Itoobiya oo booqasho ku jooga Jigjiga
Jigjiga (RH) Ra'iisal wasaaraha cusub ee dalka Itoobiya, Abiy Axmed Cali ayaa maanta oo Sabti ah booqashadiisii ugu horreysay ku tagay xarrunta dowlad deeganka Soomaalida ee Jigjiga, halkaasoo ay uga billabatay booqasho rasmi ah.
Wafdiga ra’iisal wasaaraha waxaa garoonka diyaaradaha Garaad Wiil Walaal ku soo dhaweeyay madaweynaha dowlad deeganka Soomaalida Itoobiya Cabdi Maxamuud Cumar iyo madaxda dowlad deeganka Soomaalida Itoobiya.
Booqashada Abiy ee Jigjiga ayaa la xiriirta sidii xal loogu heli lahaa colado dhawaan dhex maray qoomiyadaha Soomaalida iyo Oromada Itoobiya oo ra’iisal wasaare Abiy uu ka soo jeedo.
Dagaalladaas oo ay ku dhinteen boqolaal qof waxaa kaloo ku barakacay kumanaan kale oo labada dhinac ah, waana mid ka mid ah howlaha laga dhursugayo ra’iisal wasaare Abiy in uu xal ka keeno.
Abiy ayaa booqasho ku tagi doona dhammaan sagaalka gobal ee dalka Itoobiya, sida ay ku warrantay wakaaladda wararka Itoobiya ee ENA.
Dr. Abiy ayaa beddelaya ra’iisal wasaarihii horre ee Itoobiya ee Hailemariam Desalegn, oo xilkaasi iska casilay markii ay dalka ku yaalla geeska Afrika ay ka dhaceen bannaanbaxyo rabshada wata oo ay hoggaaminayeen Qoomiyadaha Oromada iyo Axmaarada.
Dhinaca kale, waxaa dalka Itoobiya dib ugu howl-galay adeegyada Internet-ka iyo baraha Bulshada oo muddo ku dhow afar Bilood xannibnaa, ka dib markii lagu soo rogay xaalad degdeg ah oo lagu xakamaynayay kacdoonno halkaasi ka dhacay.